9-Me-BC Ahụmahụ: Eziokwu 7 Banyere Need Kwesịrị Knowmara
Ahụmahụ 9-M-BC: 7 eziokwu banyere 9-M-BC ị kwesịrị ịma
Kedu ihe bụ 9-ME-BC?
9-Me-BC (9-Methyl-β-carboline) nke a makwaara dị ka 9-MBC bụ akwụkwọ nootropic akwụkwọ sitere na otu β-carboline. Β-Carbolines sitere na ezinụlọ carboline dị iche iche. Nke a pụtara na a na-emepụta ha ma arụ ọrụ na ahụ mmadụ yana kwa mkpụrụ osisi ụfọdụ, anụ esiri esi, anwụrụ ụtaba na kọfị.
Achọpụtara β-Carbolines (BCs) dị ka neurotoxic, agbanyeghị, ọ chọpụtara n’oge na-adịbeghị anya na 9-Me-Bc bara uru. 9-Me-BC bụ dopaminergic neuroprotector nke na-emekwa ka ọrụ ọgụgụ isi pụta.
9-Me-BC ntụ ntụ yana capsule 9-Me-BC mgbakwunye ụdị bụ ihe magburu onwe nootropic. Ebe ọ bụ na n'adịghị ka ndị ọzọ nootropics ndị uru ha kwụsịrị mgbe awa ole na ole gasịrị, 9-Me-BC na-enye mmetụta na-adịte aka ma dị ogologo.
Phcoker bụ ọkachamara ọkachamara iji mepụta ntụ ntụ 9-me-bc
9-ME-BC ntụ ntụ- Olee otú o si arụ ọrụ?
9-Me-BC gbara gburugburu nke ọma nootropic nke na-egosipụta ọtụtụ usoro ihe. Ọtụtụ usoro ọrụ 9-Me-BC nke ime ihe na-enyere ya aka ịdị oke irè na usoro ọ na-eme.
N'okpuru ebe a bụ usoro 9-Me-BC nke ọrụ;
Ọ na - ewelite ogo nke dopamine na ụbụrụ site na igbochi mmebi nke dopamine, n'adịghị ka ndị ọzọ na - akpali akpali dị ka caffeine nke na - ebelata dopamine n'ihi oke ịhapụ na itinye n'ọrụ.
9-Me-BC na-akpali ọrụ dopamine, iche iche yana ichekwa akwara ozi, dendrites na synapses n'ụbụrụ. Nke a bụ ya mere o ji nwee ike ịkwalite mmụta, na ebe nchekwa na ọrụ ọgụgụ isi
Ọ na-emetụta tyrosine hydroxylase (TH) na ihe odide ya mgbe ya na tyrosine kinases na-emekọrịta ihe. Tyrosine kinases na-ekere òkè n'ịgbanwe L-tyrosine na L-Dopa bụ maka njikọ nke dopamine.
9-Me-BC na-egbochi monoamine oxidase A na B (MAOA na MAOB) si otú a gbochie mmepụta nke ogige neurotoxic dị ka DOPAC site na metabolisation dopamine. Ihe ndị a na-akpata ọnwụ nke akwara dopaminergic.
9-Me-BC na-eme ka mitochondrial akụkụ okuku ume. Ọ na-eme nke a site na ịba ụba ma ọ bụ ichebe NADH dehydrogenase, nke a na-eji na nnyefe eletrọn maka ọgbọ ike.
9-Me-BC nwekwara ike ime ka ihe ndị na-adịghị na neurotrophic dị ka Nerve growth factor (NGF), SHH (Sonic Hedgehog Signal Molecule), ihe na-akpata ụbụrụ ụbụrụ (BDNF) nke na-eme ka ọrụ ọgụgụ isi na-arụ ọrụ, na-elekwasị anya yana mkpali.
Ọ na - akpali ọrụ neuronal ma na - akwalite uto nke ọhụụ ọhụrụ. Nke a na - eme ka ncheta na mmụta na mmuta zuru oke.
Njirimara mgbochi. 9-me-BC na-alụ ọgụ na-adịghị ala ala na ụbụrụ site na mbenata cytokines na-adịghị mma, bụ nke a maara na-akpata nchịkọta microglial nke na-eme ka ọrụ ọgụgụ isi mebie.
Uru 9-ME-BC - Kedu etu 9-ME-BC Powder (Nootropic) nwere ike inyere gị aka?
9-Me-BC mgbakwunye nwere ọtụtụ uru ahụike. Ihe dị iche iche 9-Me-BC bara uru bụ n'ihi ọtụtụ usoro omume ọ na-egosipụta.
N'okpuru ebe a bụ uru 9-Me-BC;
i. Nwere ike melite mmụta, ebe nchekwa na cognition
9-Me-BC na-akpali ọrụ mgbị ahụ yana ịkwalite uto nke sel neuron ọhụrụ. Nke a dị oke mkpa n'ịmekwu mmụta, na ebe nchekwa na ọrụ nyocha ihe niile.
9-Me-BC nwekwara bulie ATP mmepụta ume site na ịkwalite usoro iku ume mitochondrial. N'ihi ya, ike na-arịwanye elu nke na-akpali mkpali na ịmụrụ anya.
N'ime nyocha nke oke, achọtara ihe 9-Me-BC nyere maka ụbọchị iri iji meziwanye mmụta. Ọmụmụ ihe ahụ kwuru na nke a bụ n'ihi ụba dopamine yana ịkwalite uto nke synapses na dendrites.
ii. Na-enyere aka ịlụ ọgụ mbufụt
Mbufụt bụ usoro okike nke ahụ na-alụ ọgụ megide ọrịa ma ọ bụ mmerụ ahụ. Agbanyeghị, mbufụt na-adịghị ala ala nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ ma jikọọ ya na ọtụtụ ọrịa dịka ọrịa shuga na ọrịa kansa.
Ya mere ọ ga - adị mkpa iji gbochie mbufụt a tupu ọ bụrụ na ọ na - emebi emebi na ahụ gị. N'ụzọ dị mma, ntụ ntụ 9-Me-BC nwere ike inye aka gbochie mbufụt na-adịghị ala ala. Ọ na - alụ ọgụ mbufụt site n'ibelata cytokines mkpali.
iii. Nwere ike ime ka libido dịkwuo mma
9-Me-BC nootropic onyinye dị nnọọ dopaminergic. A maara ogige dopaminergic ịbawanye ogo nke dopamine na ụbụrụ. Nke a na - eme ka ọrụ dopamine nwere njikọ chiri anya na ụba libido.
iv. Nwere ike ịkwalite arụmọrụ ndị egwuregwu
Ikike nke 9-Me-BC iji mee ka mmepụta ume na ọnọdụ na mkpali na-eme ka ọ bụrụ onye nwere ike ịkwalite arụmọrụ ndị egwuregwu.
Ahụmahụ 9-Me-BC: Kedu otu esi eji 9-MBC?
Ngwadogwu 9-Me-BC a tụrụ aro na-ewere otu ọgwụ 9-Me-BC kwa ụbọchị. Otu capsule 9-Me-BC yiri 15 mg nke ntụ ntụ 9-Me-BC.
Ọ ga-adị mma ka ị were 9-Me-BC capsule n'ụtụtụ dịka a maara ya ịbawanye nche, ọnọdụ, na mkpali, nke ị ga-achọ n'oge ọrụ ụbọchị.
Ọ dị mma na iwu iji 9-MBC? 9-me-bc ihe ize ndụ?
A na-ewere 9-MBC dịka nchekwa emeju nri. Site na ihe omumu nke anumanu, 9-Me-BC nootropic nke enyere maka ụbọchị iri ka achọtara dị mma kpamkpam.
Agbanyeghị, ọ nweghị data dị maka iji mgbakwunye 9-Me-BC maka ogologo oge yana obere usoro ọgwụgwọ gbasara ụta gbasara 9-Me-BC nootropic.
Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ilezi anya mgbe ị na-ewere nootropic a site na nkwụsịtụ n'etiti iji zere ihe ize ndụ ọ bụla nwere 9-Me-BC nwere ike ibilite.
Ntinye 9-Me-BC bụ iwu na obodo ọ bụla n'ụwa niile. A na-ahazi ya ma ree ya ka ọ bụrụ mgbakwunye nri ya na-achịkwa otu ụzọ ahụ nri nri site na Nchịkwa nri na ọgwụ.
Iwu kwadoro ka onye ọ bụla zụta ma jiri mgbakwunye 9-Me-BC. Agbanyeghị, a na-ewere 9-Me-BC ka ọ bụrụ ihe nchekwa dị n'iwu, ọ na-adụ ọdụ ka mmadụ gakwuru onye dibịa ahụike tupu ya abanye na ya.
Ọ bụ ezie na mgbakwunye 9-Me-BC ka a na-ahụkarị dị ka nchekwa, enwere mmetụta abụọ nwere ike isi nweta 9-Me-Bc ị nwere ike ịnweta;
Ekwesiri ịkọwa foto-ogologo oge na ìhè anyanwụ mgbe ị na-eji ya Mgbakwunye 9-Me-BC n'ihi na nke a nwere ike ibute mmebi DNA n'ihi ọkụ ọkụ UV. Ọ bụrụ na ị ga-enwete n’okpuru anwụ, ihu igwe ga - adị mkpa iji zere mmetụta ndị metụtara 9-Me-BC.
Dopamine neurotoxicity nwekwara ike ime; Otú ọ dị, nke a na-eme mgbe ị gafere usoro onunu ogwu 9-Me-BC. Ya mere, enwere ike izere ya site na iji usoro onunu ogwu 9-Me-BC.
Mmetụta mmetụta 9-Me-BC ndị ọzọ sitere na ndị ọrụ kọọrọ ha ahụmịhe 9-Me-BC gụnyere ọgbụgbọ na isi ọwụwa. Agbanyeghị, mmetụta ọjọọ ndị a adịkarị ụkọ ma na - eme naanị mgbe mmadụ na - adoụbiga ihe oke nke mgbakwunye 9-Me-BC.
Onye nwere ike irite uru site na 9-me-bc (nootropic)?
Ihu ọma na onye ọ bụla nwere ike ịghọrọ uru site na 9-Me-BC nootropic. Agbanyeghị, ụfọdụ otu ndị mmadụ nwere ike irite uru site na 9-Me-BC karịa ndị ọzọ. Ndị ọrụ, ụmụ akwụkwọ na ndị na-eme egwuregwu nwere ike ịgha mkpụrụ n'ụba Uru 9-M-BC.
Ebe ọ bụ na, 9-Me-BC dị mma nke ukwuu ma nwee ezigbo dopaminergic, ọ bụ ezigbo mgbakwunye maka ụmụ akwụkwọ chọrọ ịbawanye anya, mkpali ịmụ ihe ka ha ka na-eme ka mmụta ha na ncheta ha kawanye icheta.
Workingrụ ọrụ nwere ike na-agwụ ike ma na-agwụ ike, ma ọ dị mma 9-Me-BC na-enye mkpali na ume nke na-eme ka arụmọrụ gị dịkwuo mma. Ọ na - akpali akwara ozi nke na - eme ka ị lekwasị anya n ’ụzọ niile.
Ndị ọrụ nyocha nke 9-Me-BC dị ezigbo mma yana enweghị mmetụta na-enweghị ma ọ bụ oke mmetụta. N'ihi ya a ọma mgbakwunye n'ihi ihe nile.
9-ME-BC ntụ ntụ maka ọrịre - Ebee ga-azụta 9-ME-BC?
9-Me-BC maka ire ere dị ngwa n'ịntanetị. Agbanyeghị, ịdị ọcha dị elu kwesiri ijide n'aka maka ị nweta nsonaazụ a tụrụ anya. Tụlee nyocha 9-Me-BC site na ndị ọrụ iji nweta nghọta nke capsule 9-Me-BC kachasị mma ma ọ bụ mgbakwunye ntụ ntụ.
Dị nnọọ ka mgbakwunye ndị ọzọ, ọ dị mma ịtụle ihe egwu 9-Me-BC nwere ike ibute ma kpachara anya dị mkpa.
Ọtụtụ ndị ọrụ nke 9-Me-BC na-azụta ya site na mma nootropics na-eweta ya onye na-enye 9-Me-BC maka ọrịre na oke dị elu.
Mgbe ị tụlere iji 9-Me-BC zụta n'aka ụlọ ọrụ na-enye 9-Me-BC maka ọrịre n'ọtụtụ buru ibu ka ị nwee ọnụ ahịa ọnụ ala.
Gille G., Gruss M., Schmitt A., Braun K., Enzensperger C., Fleck C. na Appenroth D. (2011) 9-Methyl-b-carboline na-eme ka mmụta na ncheta dị mma na oke. Neurodegen. Dis. 8, 195.
Gruss, M., Appenroth, D., Flubacher, A., Enzensperger, C., Bock, J., Fleck, C.,… Braun, K. (2012). 9-Methyl-β-carboline na-eme ka mmuta ihe mmuta jikọtara ya na ọkwa hippocampal dopamine dị elu na njupụta dendritic na synaptic. Akwụkwọ nke Neurochemistry, 121 (6), 924-931.ma ọ bụ: 10.1111 / j.1471-4159.2012.07713. x.
Hamann, J., Wernicke, C., Lehmann, J., Reichmann, H., Rommelspacher, H., & Gille, G. (2008). 9-Methyl-β-carboline up-na-achịkwa ọdịdị nke dopaminergic neurones dị iche iche na isi omenala mesencephalic. Neurochemistry International, 52 (4-5), 688-700.ma ọ bụ: 10.1016 / j.neuint.2007.08.018.
Polanski W., Enzensperger C., Reichmann H. na Gille G. (2010) Njirimara pụrụ iche nke 9-methyl-beta-carboline: mkpali, nchedo na mmụgharị nke akwara dopaminergic yana mmetụta mgbochi mkpali. J. Neurochem. 113, 1659–1675.
Wernicke, C., Hellmann, J., Ziêba, B., Kuter, K., Ossowska, K., Frenzel, M.,… Rommelspacher, H. (2010). 9-Methyl-b-carboline nwere mmetụta iweghachi na ụdị anụmanụ nke ọrịa Parkinson. Akụkọ banyere ọgwụ, 19.
RAW 9-METHYL-9H-BETA-CARBOLINE AGBARA (2521-07-5)
1.Gịnị bụ 9-ME-BC?
2.9-ME-BC ntụ ntụ- Olee otú o si arụ ọrụ?
3.9-ME-BC uru - Kedu etu ntụ ntụ 9-ME-BC (Nootropic) nwere ike isi nyere gị aka?
4. Ahụmahụ 9-Me-BC: Kedu otu esi eji 9-MBC?
5.Ọ dị mma na iwu iji 9-MBC? 9-me-bc ihe ize ndụ?
6.Olee onye nwere ike irite uru na 9-me-bc (nootropic)?
7.9-ME-BC ntụ ntụ maka ọrịre - Ebee ga-azụta 9-ME-BC?